Wzọ 9 iji bulie Ahịa Ngwaahịa na Email Marketing | Martech Zone
Satọde, 6 Juun 2015 Douglas Karr
Ebe si na IRCE na Chicago, enweghị m ike ịchịkọta ọnụọgụ teknụzụ nke mepụtara iji mata nke ọma ma kpọtụrụ ndị ahịa ebe ha nọ na ndụ ndị ahịa. Anyị ga-enwe ọtụtụ ọkwa na izu ndị na-abịanụ na ụfọdụ ndị isi na ndị ọhụụ na mpaghara a.
Ọ bụ nnukwu ihe omume nke lekwasịrị anya na ịbawanye ahịa, mgbanwe na ọnụ ahịa ndị ahịa site na nkwukọrịta kachasị mma ebe ndị ahịa na-elekwasị anya ma kpebie njem ha - mana teknụzụ nyere aka ịkwanye ma ọ bụ dọrọ ha. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche dị na usoro anyị na usoro ọgbụgba ugbu a.
N'otu oge na data na ndekọ data niile, ọ na-esiri m ike iwepụta ụzọ dị iche iche iji chepụta mkpọsa ozi-e lekwasịrị anya. N'ihi ya, anyị emeela ihe omuma ihe na-achikota ụzọ 9 ị ga - esi nyefee ndị debanyere aha gị ọrụ ka mma ma nwekwuru ike. Paras Arora, Ahịa ahia na TargetingMantra.
Na ha infographic, 9 Emailga nke Ọma Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Can Nwere Ike Can Pụrụ tozụta Ahịa Gị, Paras na ya otu ndepụta depụtara pụtara atụmatụ na jirichaa ahịa na gị atụmanya na ndị ahịa.
Na-akpali ndị ahịa site na email iji nyochaa ngwaahịa ha zụtara
Jiri nyocha A / B iji bulie oghere ma pịa-site na ọnụego
Mee ka nkwekọrịta ndị ahụ gbahapụrụ agbahapụ
Nye ndị ahịa gị kacha akwụsi ike
Mee ka ndị ahịa nọ jụụ jiri akwụkwọ akụkọ ahaziri iche
Mafere usoro aka ike, bido ikwupụta nke ọma na akwụmụgwọ anaghị akwụ ụgwọ
Mee ka ozi ịntanetị azụmahịa gị gụọ
Nweta ọfụma na CRM site na ịpinye akara ngosi onwe onye
Were ahịa email gị karịa igbe mbata
Tags: ule uleagbahapụ ịzụ ahịaụbọchị nchetaụbọchị ọmụmụpịa site na ọnụegoCRMezi ndị ahịandị ahịa na-ehi ụraemail mkpọsaemail mkpọsa ihe atụemail mkpọsaozi ịre ahịa emailakwụmụgwọ n'efudịkwuo ngwaahịa ahịaiguzosi ike n'iheemeghe ọnụegoparas dị egwuakwụkwọ ozi ahaziri ichennyocha ngwaahịaahịa ngwaahịaire erentughariNyochaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụndenye aha email elekọta mmadụezubere iche
15 Statistics na otu oge nlebara anya dị egwu bụ Digital Digital gị
Achọpụtara m na edemede a nwere ezigbo enyemaka na ahịa Email m.